यो कुनै गोपनीय छैन कि जर्मन राष्ट्रिय टोलीमा केन्द्रीय रक्षा क्षेत्र अहिले पूर्णतया बुक गरिएको छ - त्यहाँ सबै भन्दा राम्रो जोडीहरू छन्, यदि सर्वोत्तम, संसारमा रक्षकहरू छैनन् भने। जेरोम बोटेंग र म्याट्स हर्मल्स एक संयोजन हो जसले जर्मनहरूलाई 2014 मा विश्व कप जित्न अनुमति दिएको छ, धेरै कम लक्ष्यहरू हराउँछन्। अब Hummels Dortmund बोरुसिया मा एक लामो रहन पछि बायर्न फर्काउँछ, र यो न केवल जर्मन राष्ट्रिय टोली मा पनि कार्य गर्दछ, तर क्लब स्तर मा पनि।
तथापि, यो केवल दुई मान्छे हो - के हुनेछ भने यदि तिनीहरूमध्ये एक जना घाइते हुन्छन्? प्रति Mertesacker आफ्नो क्यारियर समाप्त भयो, र Benedikt Hvedes चोटहरु को एक महामारी देखि ग्रस्त छ र पहिले देखि नै एक वर्ष देखि दूर छ कि त्यो एक वर्ष पहिले थियो। तर जर्मनीले यस विषयमा निर्णय गरेको छ - वास्तवमा एक केन्द्रीय डिफेंडर Mustifi Shkodran पनि छ। यो 24 वर्षीय जर्मन अल्बेनियाई जडहरूसँग भएको छ, निस्सन्देह, आफ्नो दुई पुराना साथीहरू जेरोम र मैट्सको स्तरमा नबस्ने, तर पहिले नै अद्भुत फुटबल देखाउँछन्। Mustifi Shkodran अब स्पेनिश "वैलिसिया" को एक प्रमुख खेलाडी हो, तर उनी त्यहाँ तुरुन्तै त्यहाँ पुग्न सकेनन् - यसको विवरण अझ बढी विवरणमा छ।
हैम्बर्ग मा आफ्नो क्यारियर को शुरुवात
Mustafi Shkodran को 17 अप्रिल, 1 992मा जन्मेका थिए, र उनको प्रतिभा धेरै प्रारम्भिक वर्ष देखि प्रकट हुन थाले। उनको पहिलो व्यावसायिक फुटबल स्कूल हैम्बर्ग विद्यालय थियो, जहाँ उनी बिस्तारै बढेको र विकसित भए, अझ धेरै नयाँ कौशलता पाउने। 15 वर्षको उमेरमा उनले हम्बर्गको युवा निकायको लागि पहिलो पटक खेलेका थिए, तर त्यस समयमा उहाँले उत्कृष्ट प्रतिभालाई विचार गर्नुभएन। Shkodran आफ्नो क्लब को युवाहरु मा दुई सीजन बिताए, पछि यो परिवर्तनको लागि समय थियो - एक 17 वर्षीय केटाले ग्रेट ब्रिटेनबाट एक प्रस्ताव प्राप्त गर्यो, जो जर्मन फुटबल खेलाडीहरूको लागि एक अत्यन्त आकर्षक देश हो (यो आश्चर्यजनक छ तर सत्य)। स्वाभाविक रूपले, युवा खेलाडी तुरुन्तै सहमत भए र पहिले नै यस्तो उमेरमा क्लबको रजिष्ट्रेसन परिवर्तन भयो। Mustafi Shkodran Everton को युवा टोली को एक खेलाडी बन्यो।
यद्यपि, कुनै पनि कुरा इंग्ल्याण्डमा जर्मनहरू कतिपय हुन्छन् भने, त्यहाँ एक उच्च सम्भावना छ कि तिनीहरू त्यहाँ प्ले हुनेछैनन्। दुर्भाग्यवश, इतिहासले देखाउँछ कि प्रायः प्रायः यो हुन्छ - जर्मनीबाट फुटबल खेलाडीले अंग्रेजी प्रिमियर लिगको क्लबमा ठोस स्थान पाउँछ। यही कुरा Mustafi भयो। Shkodran, को फोटोहरू पहिले देखि नै इन्टरनेटमा देखा पर्न थालेका थिए, एक उज्यालो तारा थियो, जुन इंग्ल्यान्डमा आउन नसक्ने कुरा थिएन। यो सब भन्दा राम्रो सुरू भयो - एक 17 वर्षीय केटा पनि यूरोपा लीग म्याचमा एक विकल्पको रूपमा रिलीज भएको थियो। तर यो सबै मा - Everton मा दुई र अर्ध सावधानी को लागि, डिफेंडर ले मुख्य टीम को लागि एक देखि अधिक मिलान नहीं खेलाएको छ। उनले रिजर्वको लागि सबै खेलहरू र 19जनवरी मा सर्भर ट्राभलस विन्डोमा 1950 को उमेरमा सम्झौतालाई पारस्परिक सहमतिले क्लबको साथ समाप्ति गरे। तर अन्तिम अन्त थिएन, यो सिर्फ शुरुवात थियो। Mustafi Shkodran एक अविश्वसनीय चरित्र संग एक फुटबल खेलाडी हो, त्यसैले उनले निराशा गरेन र खरोंचबाट सबै कुरा सुरु गर्ने निर्णय गरे। विश्वको सबैभन्दा राम्रो लीगको क्लबबाट, Eurocups मा खेल्दै, खेलाडी इटालीको दोस्रो लीगमा खेलिरहेका स्याम्पडोरियामा सारियो।
यो क्षण बाट मुख्य जीवनी सुरु हुन्छ। फुटबलर श्रोड्रेन मटिफी एक खेलाडीको रूपमा "स्याम्पडोरिया" मा बनाइएको थियो - तिनी धेरै समयमै यो क्लबमा गए। वर्ष सफल भएको थियो, र स्याम्पडोरियाले ठूलो लीगमा प्रवेश गर्न सफल भए, त्यसो भए शोकरानले एक प्रमोशन परियोजनामा पाएका थिए, जहाँ उनले आधारमा स्थानमा भरोसा गर्न अर्को वर्षमा पहिले देखि नै थिए। स्वाभाविक रूप देखि, हरेक मेल मा नहीं - सबै बीस वर्षीय मान्छे पछि विश्वास जीतना चाहिए। र उहाँले गर्नुभयो - पहिले नै 2013 मा ताफीफी इटालियन क्लबको एक प्रमुख खेलाडी बन्यो र यसैले अन्य क्लबबाट गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्यो। 2014 को गर्मी मा, 22 वर्ष को उमेर मा र सबै भन्दा वादा जर्मन जर्मन रक्षक को स्थिति मा, शोकरन स्पेन को शीर्ष क्लब वैलेंसिया मा गए, जसलाई उसलाई 8 मिलियन यूरो दिए।
"भ्यालेन्सिया" मा खेल्ने
सौभाग्य देखि, यहाँ शोकोणान मा सबै केहि राम्रो लाग्यो - त्यो भविष्य को लागि एक प्रतिभाशाली खेलाडी को रूप मा नहीं लिया, तर नींव को एक खेलाडी को रूप मा, त्यो तुरुन्त भयो। उनले यस क्लबको लागि दुई पूर्ण सीजन खेलेका थिए, तर चीजहरू उनको लागि धेरै राम्ररी जान हुँदैन। शकोडरन अझै राम्रो भन्दा बढी छ र जर्मनीबाट तेस्रो बलियो मध्य संरक्षक हो, तर उनले अन्तिम सिजनमा गम्भीरतापूर्वक पास पारेका थिए। यो आशा छ कि यो केवल एक अस्थायी मंदी छ र एक नया upsurge पछ्याउनेछ, किनभने जर्मनी निश्चित रूपमा यो डिफेंडर चाहिन्छ, र "Valencia" लाई धेरै मा उल्लेख गर्दछ। यद्यपि, यो सबै होइन कि एक जीवनीले तपाईंलाई बताउन सक्छ। Shkodran Mustafi क्लब स्तर मा न केवल ज्ञात छ - राष्ट्रीय टीम मा उनले पहिले देखि नै अभ्यास गर्न को लागि प्रबंधन गरेको छ - र पनि पुरस्कार जीता।
जर्मन राष्ट्रिय टोलीका लागि प्रदर्शन
जर्मनी Shkodran राष्ट्रिय राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो विश्वकप अघि अघिल्लो म्याचको लागि भनिन्छ। ती तीन मध्ये उनले भाग लिन सकेन, तर पोल्ससँग मिलेर उनले मैदानमा90 मिनेट बिताए र उत्कृष्ट खेल देखाए। स्याम्पडोरियाका लागि भाषणहरू र यस खेललाई कोच जोकिम लेभलाई स्पष्ट बनाइयो, यो खेलाडीलाई गणना गर्न सकिन्छ, त्यसैले उनी विश्व कपको लागि आवेदनमा समावेश गरिएको थियो। त्यहाँ यो मानिन्छ कि Mustafi बेंच मा बैठेगा, तर अचानक यो क्षेत्र मा पहिले देखि नै उनको पोर्चुगल को पहिलो मुकाबला मा बाहिर निकलने को आवश्यकता थियो - जहां मुस्फू ले सही डिफेंडर को आजीवन स्थिति नहीं लिया। नतिजाको रूपमा, उनले घानासँग यो खेलमा खेलेका थिए, र त्यसपछि अल्जेरियासँग 1/8 फाइनलमा खेलाइयो, जहाँ उनले एक अप्रिय चोट पाए र बाँकी बाँकी टूर्नामेंटलाई पराजित गरे। सौभाग्य देखि, लियो एहसास भयो कि यो एक ठेठ केन्द्रीय डिफेंडर को दाहिने किनार को लागी कुनै मतलब छैन - र यूरोपीय चैंपियनशिप मस्तफी को लागि लगभग सबै योग्यता बेंच मा बैठे, केवल जिब्राल्टर संग खेल मा केवल खेल। युरोपियन चैंपियन च्याम्पियनसिपको - यो कुन शक्ड्रनले देखाउनेछ?
दुर्भाग्यवश, समय मा, Mustifi केवल एक ट्राफी छ, तर तिनी धेरै महत्त्वपूर्ण छ - विश्व कप 2014। तर कुनै पनि Mustifi को महान भविष्य को अगाडी संदेह छैन।
विद्वान - यो पेशामा के हो? एक philologist कहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ?
दबाइ बच्चाहरु को लागि "Otipaks" अनुमति छ कि छैन?
शरद ऋतु - चमत्कार समय। शरद ऋतु महिनामा गर्न कुराहरू?
फ्रैक्टोज - को sweetest प्राकृतिक चीनी छ
बच्चाहरु र वयस्कों को लागि एक नीबलाइजर मा मिनामिस्टिन संग संचयन: निर्देश